Yobhi 18 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
18 Waza waphendula uBhiledadi umShuha wathi: 2 “Koda kube nini na niwaphelisa amazwi?Nifanele niqonde, ukuze emva koko sithethe. 3 Kutheni sifanele sibalelwe kumarhamncwa+Sigqalwe njengabangahlambulukanga emehlweni enu? 4 Uyawuqwenga umphefumlo wakhe ngenxa yomsindo wakhe.Ngaba umhlaba uya kushiywa ngenxa yakho na,Okanye iliwa liya kusuka endaweni yalo? 5 Ukukhanya kwabangendawo nako kuya kucinywa+Nentlantsi yomlilo wakhe ayiyi kukhanya. 6 Ukukhanya kuya kuba mnyama ententeni yakhe,+Yaye kuyo isibane sakhe siya kucinywa. 7 Amanyathelo akhe amandla aya kuxineka.Kwanecebo lakhe liya kumwisa.+ 8 Kuba eneneni iinyawo zakhe ziya kumqhubela emnatheni,Yaye uya kunyathela umnatha ophinyeneyo.+ 9 Isibatha siya kumbamba ngesithende;+Umgibe+ uqhubeka umbambile. 10 Ufihlelwe intambo emhlabeni,Nento yokubambisa emendweni wakhe. 11 Macala onke, izinto ezinkwantyisa ngesiquphe zimenza axhume kukothuka,+Zize zimsukele ngokwenene. 12 Amandla akhe ayaphela,Yaye intlekele+ ihlala ilungele ukumenza ajingxele. 13 Iya kudla izicwili zolusu lwakhe;Izibulo lokufa liya kudla amalungu omzimba wakhe. 14 Ukuzithemba kwakhe kuya kuncothulwa ententeni yakhe+Kumqhubele kukumkani wonkwantyo. 15 Ententeni yakhe kuya kuhlala into engeyoyakhe;Isalfure+ iya kusasazwa endaweni yakhe yokuhlala. 16 Ngaphantsi iingcambu zakhe ziya koma,+Yaye, ngaphezulu, isebe lakhe liya kubuna. 17 Ukukhankanywa kwakhe kuya kutshabalala emhlabeni,+Yaye igama lakhe aliyi kubakho esitratweni. 18 Baya kumtyhalela ngaphandle kokukhanya ebumnyameni,Baze bamgxothe elizweni elinemveliso. 19 Akayi kuba nazizukulwana nanzala phakathi kwabantu bakowabo,+Yaye akuyi kubakho usindayo endaweni aphambukele kuyo. 20 Ngomhla wakhe abantu baseNtshona baya kujonga bethe manga,Yaye ngokuqinisekileyo kwanabantu baseMpuma baya kutyhwatyhwa. 21 Le yiminquba yomenzi-bubi kuphela,Yaye le yindawo yalowo ungamazanga uThixo.”